“Tanàna Miray i Esmeraldas” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jona 2018 3:43 GMT
Dayana Caicedo sy Viviana Velastegui dia mpikambana ao amin'ny Centro de juventudes de Esmeraldas (Foiben'ny Tanora ao Esmeraldas), fikambanana momba ny zon'olombelona ao Esmeraldas, Ekoadoro miara-miasa amin'ny ankizy, ny tanora sy ny vondrom-piarahamonina LGBTI. Iray amin'ireo asany voalohany indrindra ny fandaharana isan-kerinandro amin'ny radio La Calle Habla (Ny Resaky ny Lalana), toerana ho an'ny adihevitra sy resadresaka momba ny olana atrehin'ny fiarahamonin'izy ireo. Ity manaraka ity dia dikan-teny tamin'ny antsafa niarahana tamin'i Dayana sy Viviana raha nanadihady ny zavon-teny ho an'ny voambolana “Esmeraldas” sy “Paz” (fandriampahalemana) sy ny voambolana “Frontera,” (sisintany) manondro ny tanànan'izy ireo dia i Esmeraldas voakasiky ny ady manamorona ny sisintany itambarany amin'i Kolombia izy ireo.
Ireo teny manjaka avy amin'ny lahatsoratra 8.811 navoaka teo anelanelan'ny volana Janoary 2017 sy ny volana Aprily 2018 ary nahitana ny teny “Esmeraldas” (lahatsoratra 5339) sy ny “paz” (lahatsoratra 9184) tao anatin'ny angon'ny Media Cloud tamin'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny Espaniola tao Ekoadoro. (jereo akaiky kokoa ny sary)
voambolana manjaa avy amin'ny lahatsoratra miisa 3867 nivoaka tanelanelan'ny Janoary 2017 sy Avrily 2018 manonona ny “Frontera” (sisintany) ao anatin'ny angona Media Cloud roa an'ny sehatra fampitam-baovaon'i Ekoadaoro miteny espaniola. (Hijery lehibe kokoa)